February 20, 2020 - MM Live News
#ခေတ်ပျက်နေပြီလား??????? ကားဆရာများသတိရှိကြပါ။ ယနေ့ 20-2-2020 ည ရး၃၀တွင် မန်းမှတက်လာသော ၁၂ ဘီးယာဉ် 8J/4671ယာဉ်အား ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနောင်ပိန်လမ်းခွဲနှင့် ခိုက်တုန်ကြား ရင်ကွဲတောင်မရောက်မှီ (၃)ဖာလုံခန့်အလိုတွင် ….. ဆိုင်ကယ်(၂)စီးမှ ကန့်လန်ခံပြီး ကားအားတားသဖြင့် ကားဆရာမှရပ်ပေးလိုက်စဉ် ဆိုင်ကယ်နောက်မှပါလာသူများမှ ကားပေါ်တက်ထိုးကြိတ်ပြီး ပါလာသော ငွေများလုယူထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။ အထိုးခံရသော ကားဆရာမှာ ကားပေါ်မှဆင်း၍ လမ်းပေါ်လာကားကြီးများကို ရပ်တန့်ပေးရန် အကူအညီတောင်းခံစဉ် တွဲကားတစ်စီးမှရပ်၍ အကျိုးအကြောင်းမေး ကူညီရန်လုပ်နေစဉ် သတိလစ်မေ့မြောသွားပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်ဖြစ်နေသဖြင့် လမ်းသွားကားဆရာများစုပေါင်း၍ သတိလစ်သွားသောကားဆရာအား ကားပေါ်သို့ပြန်တင်ပေးပြီး ကမ်းလင့်လက်များလူမှုကူညီရေးအသင်း နောင်ပိန် အားအကူအညီတောင်းခံသဖြင့် …… လူနာတင်ယာဉ်(၂)စီး နှင့်လူအင်အား(၁၀)ရောက်သွားရောက်၍ဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှ နောင်ပိန်ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကမ်းလင့်လက်များ / လူမှုကူညီရေးအသင်း နောင်ပိန / 09-772227161 / အသင်းမှတ်တမ်း -46/2020 / #ZMT […]
လာသမြှလူကိုအခဉျြဖမျးပွီး အမဲဖကျြဖို့ စောငျ့နကွေတဲ့ ဘုရငျနောငျဈေးကွီး မှ ကလိနျကကဈြမြား
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်မစားကြပဲ တစ်နပ်စားဉာဏ်ဖြင့် လာသမျှလူကိုအချဉ်ဖမ်းပြီး အမဲဖျက်ဖို့ စောင့်နေကြတဲ့ ဘုရင်နောင်ဈေးကြီး မှ ကလိန်ကကျစ်များအကြောင်းကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။အတော်ကို ဆိုးဝါးလှပါတယ်။ဘယ်သောအခါမှ ချမ်းသာလာမည့်သူများမဟုတ်ပါ။မသမာသူများဖြစ်ကြပါသည်။သတိထားနိုင်ကြပါစေ။ ကျနော် ကားကြီးပစ္စည်း တခုသွားဝယ်ရင်း ဘုရင့်နောင်ဈေးသို ရောက်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းရရန် နာရီဝက်ခန့်စောင့်ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူငယ်တစ်ဦးမှ ကျနော် စီးလာသော Wish 2006 ကားလေးအား ဗန်ဘာလျော့နေတယ် လုပ်လိုက်ပါလား ဟုပြောပါသည်။ ကျနော်လည်း ဘယ်လာက်ကြာမလဲမေးသော အခါ 15 မိနစ်လောက်ဆိုပြီးပါတယ် ဆရာဟုပြောပါသည်။ အဲဒါဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲထပ်မေးသောအခါ ကလစ်ခုကို ငါးရာ တစ်ထောင်ထဲပါ လိုအပ်တာထည့်လိုက်မယ် ကျနော်တို့လက်ခမယူပါဘူးဟုပြောပါသည်။ အင်း..ဒါဆို တသောင်း နှစ်သောင်းလောက်နဲ့ အချိန်လဲရတာပဲဟု စိတ်ထဲတွေးကာလက်ခံလိုက်သည်။ ဗန်ဘာများဖြုတ်ချလိုက်သည်။ ကားမှန်ကလဲချောင်နေတယ်ဆရာ ဘောတလုံး 1500 ပဲလက်စနဲ့ထည့်လိုက်ပါလား ကျနော်လည်းအင်းပေါ့ဟုပြောလိုက်မိသည်။ သုံးလေးယောက်ဝိုင်းလုပ်ကြသည်။ နောက်တယောက်က အစ်ကို ရှော့ဘားသဲကာပေါက်နေတယ် […]
ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှုဆိုတာက ဟို ကလေးနှစ်ယောက်ကို ထောင်ကျစေချင်တာလား? တရားဥပဒေ ဆိုတာက လူတွေ အလျဉ်းသင့်သလိုချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ် စည်းကမ်းတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ချင်မှ မှန်မယ် တရားမျှတမှု ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ဆိုတော့ ထောင်ကျသွားတိုင်းကော လူတွေက ပိုကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာကြလား ပေါ့။ ကိုကို ညီညီ ဟာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒါကို ပိုလို့စဉ်းစားရမယ်။ အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ မုဒိန်းကောင်ကိုအားပေးတာမဟုတ်ဖူး သမီးရှင်ဘက်ကစဉ်းစားသလို သားရှင်ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ရအောင်? ကျနော်စဉ်းစားဖူးတယ် အဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်က ငါ့ သားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ကယ်လည်း ကိုယ်မွေးမှ ကိုယ့်သားလောက်ရှိတာကိုး။ ကျနော်ကတော့ လိုက်ရှင်းမှာပဲ ရှိသမျှစည်းစိမ်တွေပုံအောပြီး ကျနော့်သားထောင်မကျဖို့ ကြိုးစားမယ်။ အဲ့ဒါ အဖေတစ်ယောက်အတွက် အမှန်တရားပဲ။ ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ ကိုကို ညီညီကိုကလေးလို့သာမြင်ပြီး အဲ့အရွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ […]
ရထားသံလမျးပျေါ ထနျးတုံးမြား ကြောကျတုံးမြားတငျထားသူ တရားခံမိပါပွီ
တရားခံမိပါပြီ #ရထားသံလမ်းပေါ် ထန်းတုံးများ ကျောက်တုံးများတင်ထားသူမှာ မီးရထားသံလမ်းအလုပ်သမားဖြစ်နေ ၁၈.၂.၂၀၂၀‌နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့နယ် မဒေါင်းလှဘူတာနှင့် ခင်ဦးဘူတာကြား မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားမီးရထားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်-၄၅၉/၂ နှင့် ၄၅၉/၃ အကြား…. ရထားသံလမ်းပေါ်တွင် အရှည် ၄ ပေ လုံးပတ် ၂ပေခွဲရှိ ထန်းလုံး ၁လုံး၊အရှည် ၈ ပေ လုံးပတ် ၂ပေခွဲရှိထန်းလုံး ၁လုံး တို့ကို ထန်းရွက်များဖြင့်အုပ်၍ ကန့်လန့်တင်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး… မိုင်တိုင်အမှတ်၄၅၈/၂၄ သံလမ်းပေါ်၌ ၁၂ လက်မခန့်ရှိသည့် ကျောက်တုံး ၁ တုံးအား အဝတ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်တင်ဆောင်ထားခဲ့သည့် တရားခံမှာ မီးရထားသံလမ်းအလုပ်သမားဖြစကြောင်း ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိပါသည်။Photo :Crd / Credit-Nyi Nyi Win ဆပ်​စပ်​သတင်း နာကျည်းချက်နဲ့ ရက်စက်ပါပေ့ကွယ် ၁၈၊၂၊၂၀ရက်နေ့က ခင်ဦးဘူတာနှင့်မဒေါင်းလှဘူတာကြား မီးရထားသံလမ်းပေါ်တွင်ထန်းတုံးများ ကျောက်ခဲတုံးများတင်ဆောင်ပြီး […]
နှားလှညျးတဈစီး သဈပငျဝငျတိုကျပွီး နှားလှညျးမောငျးသူ သဆေုံး…
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှာ နွားလှည်းတစ်စီး သစ်ပင်ဝင်တိုက်မှု ဖြစ်ပွား၊ နွားလှည်းမောင်းသူ သေဆုံး ကျောက်ကြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဗျက်အင်းကျေးရွာအနီးရှိ လှည်းလမ်းမပေါ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ မနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်က အမျိုးသားတစ်ဦး လှည်းနှင့်သစ်ပင်ညှပ်၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူမှာ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ၊ ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စုတွင် နေထိုင်သူ မော်တကယ် ၅၇ နှစ်(ဘ)ဦးကျင်သိန်း ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပြီး သေဆုံးသူတွင် ဝဲပါးပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ၊ ညာနံရိုးပိန်ခြိုပ်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေ သည်ကို သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ကျောက်ကြီးမြို့ နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲရုံသို့ ဆေးစာထင်မြင်ချက်ပေးနိုင်ရန် သေဆုံးသူ မော်တကယ်အား ပို့ဆောင်ထားရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူ မော်တကယ် ၏သေဆုံးခြင်းမှာ […]
လမျးမတျောသံဈေးမီးနှငျ့မီးသတျကားကို လမျးမဖယျကွသညျ့အပွငျ လမျးလယျထိ ဈေးဗနျးခငျး ဈေးရောငျးမပကျြသညျ့ ဈေးသညျတှေ
လမ်းမတော်သံဈေးမီးနှင့်မီးသတ်ကားကိုမဖယ်ကြတဲ့ဈေးသည် မီးလောင်သည့်ဈေးပေါ်လူတွေ့ပိတ်၍ အန္တရယ်ကြုံနေကြတယ်….. ထိုဈေးသည်တွေ တချက်ပင်ကိုယ်ခြင်းမစာနာ စိုးရိမ်စိတ် ပူပင်စိတ်ပင်မထား …ဈေးရောင်းမပျက် ဈေးဗန်းပင်မဖယ်…. မိမိအပူကြုံသောကကြုံ အန္တရယ်ကြုံမှ သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုထင်ကြသည့် ဈေးသည်များ …. မြင်သည့်အတိုင်းlသူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ပုံစံ …..လမ်းလယ်ထိ ဈေးဗန်းခင်း ဈေးရောင်းမပျက်သည့်အပြင ဈေးဗန်းများကိုပင် မဖယ်ကြတာအားလုံးမြင်ပါ…. သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်တွေလည်း ထိုနေရာတဝိုက်မှာရှိနေတော့လည်း တခွန်ပင်ဝင်မပြော မရှင်းပေးတာ သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်၍လား ….. တာဝန်မဲ့စွာနေနေကြသည်လား ခင်မင်မူ့ပျက်ကြမည်ကိုစိုးရိမ်းနေကြ၍လား…..။Credit Shwe Khit unicode လမျးမတျောသံဈေးမီးနှငျ့မီးသတျကားကိုမဖယျကွတဲ့ဈေးသညျ မီးလောငျသညျ့ဈေးပျေါလူတှပေိ့တျ၍ အန်တရယျကွုံနကွေတယျ….. ထိုဈေးသညျတှေ တခကျြပငျကိုယျခွငျးမစာနာ စိုးရိမျစိတျ ပူပငျစိတျပငျမထား …ဈေးရောငျးမပကျြ ဈေးဗနျးပငျမဖယျ…. မိမိအပူကွုံသောကကွုံ အန်တရယျကွုံမှ သူတို့နှငျ့သကျဆိုငျသညျဟုထငျကွသညျ့ ဈေးသညျမြား …. မွငျသညျ့အတိုငျးlသူတို့နှငျ့မသကျဆိုငျသညျ့ပုံစံ …..လမျးလယျထိ ဈေးဗနျးခငျး ဈေးရောငျးမပကျြသညျ့အပွင ဈေးဗနျးမြားကိုပငျ မဖယျကွတာအားလုံးမွငျပါ…. သကျဆိုငျရာ […]
ဝမျးစာရေး အခကျအခဲရှိလို့ ပဲအငှားလိုကျခူးနသေူ ကြောငျးသားအတှကျ ဆနျအိတျကို ဆိုငျကယျပျေါတငျပွီးလိုကျပို့တဲ့ ရှိတော့ရှိတယျ ရှားတဲ့မွတျဆရာပါ
ယနေ့ခေတ်မှာ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတဲ့မြတ်ဆရာပါ ….တပည့်မရှား တစ်ပြားမရှိ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏။ တပည့်ဖြစ်သူ ဝမ်းစာရေး အခက်အခဲရှိလို့ ကျောင်းမတက်ပဲ မိခင်ဖြစ်သူနှင်အတူ ပဲအငှားလိုက်ခူးနေသူ တပည့်ကျောင်းသားအတွက်….. ဆန်အိတ်ကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးလိုက်ပို့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတဲ့ဗျာ လေးစားမိပါတယ်…. ကွင်းထဲမှာ သားအမိတွေ ပဲသွားကောက်နေတယ်ဆိုလို့ လယ်ကွင်းထဲအရောက်လိုက်သွားပြီး တပည့်ဖြစ်သူကို စာသင်ခန်းအတွင်း အရောက်ပြန်ခေါ်တာတဲ့ မြတ်ဆရာပါ…..။photo news – po po (ကျောင်းကုန်း) Credit Yan Naing Swe unicode ယနခေ့တျေမှာ ရှိတော့ရှိတယျ ရှားတဲ့မွတျဆရာပါ ….တပညျ့မရှား တဈပွားမရှိ ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏။ တပညျ့ဖွဈသူ ဝမျးစာရေး အခကျအခဲရှိလို့ ကြောငျးမတကျပဲ မိခငျဖွဈသူနှငျအတူ ပဲအငှားလိုကျခူးနသေူ တပညျ့ကြောငျးသားအတှကျ….. ဆနျအိတျကို […]
ရနျကုနျ လသာ သံဈေး မီးလောငျမှုဖွဈပှားရာ level5ထိမွငျ့တကျ
ရန်ကုန် လသာ သံဈေး မီးလောင်မှု level5ထိတက် ၂၀.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၆:၀၅ အချိန်ခန့်၊ လသာမြို့နယ်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ သံဈေးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေရာ Level5ယာဉ်အုပ်စုဖြင့် ငြိမ်းသတ်နေရပါတယ်….. ဓာတ်လှေကားအတွင်းနှင့် (၁၀)လွှာတွင် လူများပိတ်မိနေ၍ သတင်းရရှိသဖြင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့မှ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ…. လက်ရှိအချိန်တွင် လူဦးရေ(၂၁)ဦးထိ ကယ်ဆယ်ထားရှိပြီး ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ unicode ရနျကုနျ လသာ သံဈေး မီးလောငျမှု level5ထိတကျ ၂၀.၂.၂၀၂၀ ရကျနေ့၊ နံနကျ ၆:၀၅ […]